Nabada ayaa ka fudud dagaalka Warbixin
Home Diaspora Nabada ayaa ka fudud dagaalka Warbixin
Jariirada the Independent oo maqaalkan qortay, ayaa waxaa qoray qoraaga lagu magacaabo “Bol Fali”, waxa uuna uga hadlayaa qiimaha ama dhaqaalaha ku kala baxa “Dagaalka iyo Nabada”.
Qoraaga maqaalkan oo tusaale ahaan usoo qaadanaya, ayaa sheegay mar uu Soomaaliya soo gaaray inuu qoriga AK-47 uu kala baxay 6 gini iyo bar.
Qoraaga ayaa sheegay in qiimaha ku baxa dagaalka khasaaraha ka dhasha uusan ku koobneen nafafyaal go’a, balse waxa uu sheegay in bur burka ka dhasha uu saameyn weyn ku yeesho aas aaska nolosha shacabka.
Qoraagan oo maqaalkiisa dhanka tusaalaha marwalbo Soomaaliya uga soo qaadanaya ayaa sheegay in dagaalada Soomaaliya si loo joojiyo ay u baahantahay 1.5 Million oo dolar, halka Caalamka kale marka uu dagal ka dhaco ay u baahantahay qiimo gaaraya 7.5 Million oo dolar si loo joojiyo.
Qoraaga maqaalkan ayaa sheegay in wasaarada arimaha horumarinta Britain, ay sanad walbo dhaqaale xoogan siiso doowladaha faqiirka ah ee Afrika, si looga hortago dagaalo iyo dhibatooyin dhici kara.
Doowlada Britain, waxay dhowr mar isku dayday ineey xakameeyso hubka fud fudud ee sida sharci darada ah ku gala wadamo ay kamid tahay Soomaaliya, iyo ka ganacsiga dahabka iyo dheemanka, kuwaasoo doowladaha waaweeen si sharci darro ah looga keeno wadamada Afrika, sida Kongo oo kale.